Go’aanka Baarlamaanka | Somaliska
Dood dheer ka dib oo si weyn layskula lafa guray arimaha soo galootiga iyo socdaalka ayaa waxaa na soo gaaraya warar sheegaya in baarlamaanka Sweden uu diiday mooshinadii lagu dalbanayay mideynta familida qaasatan kuwa Soomaalida iyo inta badan mooshinadii ku saabsanaa arimaha socdaalka iyo soo galootiga iyagoo raacay talada ay soo jeediyeen gudi hore loogu saaray arintaan. Talada gudiga ayaa ahayd in la diido mooshinada la soo bandhigay iyadoo sida aan wararka ku heleyno arintu sidaas u dhacday. Maria Ferm oo ka tirsan xisbiga Miljlöpartiet kana mid ahayd dadkii soo diyaariyay mooshinada ayaa ii xaqiijisay in la diiday guud ahaan mooshinadii iyadoo intaas ku dartay in iyaga iyo dowlada ay sii wadayaan wadashaqeynta ay kala saxiixdeen bilowgii sanadkaan. Waxay intaas ku dartay Maria in xisbiga Miljöpartiet ay ka shaqeynayaan sidii heshiiskii dowlada ay la kaleen loo dardar galin lahaa oo xal deg deg ah loogu heli lahaa mideynta reeraha Soomaalida. Sidoo kale waxaan jawaab ka helay Christina Höj Larsen taasoo ii sheegtay in iyaga iyo xisbiga SocialDemokraterna oo keliya ay u codeeyeen Reservationka sidaa darteedna looga codbatay. Waxay intaas ku dartay in xisbiga Vänsterpartiet uu ka shaqeyn doono sidii isbedel deg deg ah loogu sameyn lahaa sharciga si loo suurto geliyo mideynta familada Soomaalida. Waxaa sidoo kale jawaab ii soo diray Amir Aden oo ka tirsan mudanayaashii soo diyaariyay mooshinada shalay la diiday isagoo ii sheegay in la diiday dhamaan mooshinada oo sababtu ay tahay in horey looga heshiiyay arinta ku saabsan mideynta reeraha Soomaalida oo lagu xalin doono dheecaanka DNA heshiiskaas oo ay gaareen Dowlada iyo Xisbiga Miljöpartiet. Waxa uu intaas ku daray dadka aan wax isku dhalin in xal kale loo raadin doono balse uusan hada ogeyn sida xalkaas uu noqonayo. Fursada kaliya ee furneyd xaga codeynta baarlamaanka ayaa ahayd wax loo yaqaan (Reservation) oo ay sameeyeen xisbiyada SocialDemokraterna iyo Vänsterpartiet oo ay ku dalbadeen in la ansixiyo mooshinada ku saabsan arimaha mideynta familada balse nasiib daro waa laga itaal roonaaday dalabkaas. Arintaan ayaa loo aanaynayaa heshiiskii ay gaareen dowlada Sweden iyo xisbiga Miljöpariet oo iyagu hore ugu heshiiyay in la xaliyo arimaha mideynta familada balse waxaa soo baxay dhaliilo ku wajahan arintaas isbuucyadii ugu dambeeyay iyadoo la sheegayo in ay waqti dheer qaadaneyso oo laga yaabo ilaa 2013. Si kastaba ha ahaatee arinta Soomaalida ayaa maanta si weyn looga dooday baarlamaanka Sweden iyadoo sidoo kale ay Soomaalidu shucuurtooda mudaharaad ku soo bandhigeen. Wali waxaan soo aruurineynaa warbixinada ku saabsan arintaan, wixii ku soo kordha waxaan ku soo bandhigi doonaa halkaan.
Dood dheer ka dib oo si weyn layskula lafa guray arimaha soo galootiga iyo socdaalka ayaa waxaa na soo gaaraya warar sheegaya in baarlamaanka Sweden uu diiday mooshinadii lagu dalbanayay mideynta familida qaasatan kuwa Soomaalida iyo inta badan mooshinadii ku saabsanaa arimaha socdaalka iyo soo galootiga iyagoo raacay talada ay soo jeediyeen gudi hore loogu saaray arintaan. Talada gudiga ayaa ahayd in la diido mooshinada la soo bandhigay iyadoo sida aan wararka ku heleyno arintu sidaas u dhacday.
Maria Ferm oo ka tirsan xisbiga Miljlöpartiet kana mid ahayd dadkii soo diyaariyay mooshinada ayaa ii xaqiijisay in la diiday guud ahaan mooshinadii iyadoo intaas ku dartay in iyaga iyo dowlada ay sii wadayaan wadashaqeynta ay kala saxiixdeen bilowgii sanadkaan. Waxay intaas ku dartay Maria in xisbiga Miljöpartiet ay ka shaqeynayaan sidii heshiiskii dowlada ay la kaleen loo dardar galin lahaa oo xal deg deg ah loogu heli lahaa mideynta reeraha Soomaalida.
Sidoo kale waxaan jawaab ka helay Christina Höj Larsen taasoo ii sheegtay in iyaga iyo xisbiga SocialDemokraterna oo keliya ay u codeeyeen Reservationka sidaa darteedna looga codbatay. Waxay intaas ku dartay in xisbiga Vänsterpartiet uu ka shaqeyn doono sidii isbedel deg deg ah loogu sameyn lahaa sharciga si loo suurto geliyo mideynta familada Soomaalida.
Waxaa sidoo kale jawaab ii soo diray Amir Aden oo ka tirsan mudanayaashii soo diyaariyay mooshinada shalay la diiday isagoo ii sheegay in la diiday dhamaan mooshinada oo sababtu ay tahay in horey looga heshiiyay arinta ku saabsan mideynta reeraha Soomaalida oo lagu xalin doono dheecaanka DNA heshiiskaas oo ay gaareen Dowlada iyo Xisbiga Miljöpartiet. Waxa uu intaas ku daray dadka aan wax isku dhalin in xal kale loo raadin doono balse uusan hada ogeyn sida xalkaas uu noqonayo.
Fursada kaliya ee furneyd xaga codeynta baarlamaanka ayaa ahayd wax loo yaqaan (Reservation) oo ay sameeyeen xisbiyada SocialDemokraterna iyo Vänsterpartiet oo ay ku dalbadeen in la ansixiyo mooshinada ku saabsan arimaha mideynta familada balse nasiib daro waa laga itaal roonaaday dalabkaas.
Arintaan ayaa loo aanaynayaa heshiiskii ay gaareen dowlada Sweden iyo xisbiga Miljöpariet oo iyagu hore ugu heshiiyay in la xaliyo arimaha mideynta familada balse waxaa soo baxay dhaliilo ku wajahan arintaas isbuucyadii ugu dambeeyay iyadoo la sheegayo in ay waqti dheer qaadaneyso oo laga yaabo ilaa 2013.
Si kastaba ha ahaatee arinta Soomaalida ayaa maanta si weyn looga dooday baarlamaanka Sweden iyadoo sidoo kale ay Soomaalidu shucuurtooda mudaharaad ku soo bandhigeen.
Wali waxaan soo aruurineynaa warbixinada ku saabsan arintaan, wixii ku soo kordha waxaan ku soo bandhigi doonaa halkaan.
Asc ugu horay ad ayan uga xumahay go’anka aygaren galada aniga waxan ahay wil somaliyed oo xaaskis swedan ku noshahay lona gay wayey Marka dad badana waa ilamid marka waxan leyahay swedan xaaskayga passporka ka ceshada madama ad ii gaywaysen markasna waxay aska dhibi donta wadankale oo isu kengeya ama ba wan isla nolanayna oo yurub dhan wan aska ilawayna
May 8, 2011 at 05:51
a s c walalayalow waxas oo dhan waxa iiga daran nag la aan hadii gabar ii maciinee eey jirto iyo hadii gabar la dhalatay ani hala igu sadaqeeysto iswedhen waxa ka wanagsan sadaqada qof walbana waxa ka horeya wiixi uu labaxay in tii uu joogay aduunka jawaab ayaan sugayaa
aduunya joog says:
walaalayaa waxaan idin sheegayaa inuu ilaah naga ogyahay maanta dantu meeshay kujirto waryaa kaxumaanbadnaan lahaa badan meel aymaanta kaakaga dhihi lahaayeen ciyaalka hooyo bax amaa aabo bax uu ilaah idinkaga celiyay gaaladaa diidmadeeda hadii aad isdhahaysid lacg kuhel wargaal nimadaa kaxun oo ay kubadayaan gaaladaa ama ciyaalkiin a oo ayqaataan kumahadiya ilaahiin idinka xijaabay arintaan kuxamdiya qofkuu ilaah qeer ;lajeclaaday waa walaal kiin mahdi tii ale ayaa diman haquusanina byyyyyyyy
May 9, 2011 at 15:14
ASC walaalayaal marka hore aan ALLAAH isku xirno oo barino marka labaad waa inaan ka fekernaa sababaha niloodiiday waan garan karnaa sababta, waxaa haboon inaan dib iskugu noqono oo aan wax ka bedelno hab dhaqankeena, xagga shaqada,wax barashada, isku duubnida somalida iyo wixii lamida hadaan dadaalkaas lanimaadno cidna wax inooma diideen lkn hadaan saan ku sii jirno oo aan cayr uun gurano dariiqyadana ka qaylino oo noqono dad aan wax soosaar lahay yaa ina qaderinaya
asc aad ban u salamayaa dad woynaha soomaliyeed walahi waa yaab ee waxa aad ii sheeqtaa halka ay marayaan dadkii ku dhawaaqay in ay quriqa baarlamaanka ee swden ay hor fadhiisa nayaan waayo diyaar ban u ahay ee haykay maraysaa how shaasi wsc
Asc,waxa aan fikrad ku darsa nayaa fikrada fadumo waaruntaa oo dadka aan ka dhalanay ee somaliyeed ku madadaalan sidii ay sharaf tooda iyo diintooda u ilaali lahaayeen waxana ina kala dilaya waa dadka si yaasi yiinta ah ee dadka shicibka ah u ah madax dan hadii aan wax ka soo qaato waxa aan ku noolnahay sweden waxa ay samays tee dadkii naqa soo horeeyay jaaliyad tasow marka komka layska duwan qalinyo la u duwan qashado namn somali marka la so oqolado waxa ay sku badashaa qabiil kaasaa nala hadhay sidee blooqa qubbi karaa walalyaa waa su aal wsc